Masar oo aqbashay Safiirka ay dowladda Soomaaliya u magacaawday xilli uu jiray khilaaf - Awdinle Online
Home News Masar oo aqbashay Safiirka ay dowladda Soomaaliya u magacaawday xilli uu jiray...
Masar oo aqbashay Safiirka ay dowladda Soomaaliya u magacaawday xilli uu jiray khilaaf
Dowladda Masar ayaa aqbashay Safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u magacawday dalkaas ahna Wakiilka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta, kaas oo dhawaan ay dowladda Soomaaliya Magacaawday.
Danjire Ilyaas Sheekh Cumar ayaa Shaqadiisa safiirnimo ka bilaabi doono dalka Masar, kaidb markii uu hagaagay xiriirkii Soomaliya & Masar oo tan iyo sanadkii la soo dhaafay mugdi ku jiray.
Danjire Ilyaas Sheekh Cumar ayaa noqday Safiirka kaliya ee Dowladda Soomaaliya magacawday 12 Safiir ee dhowaan Xukuumadda la horgeeyay balse dib loo soo celiyay, waxaana ujeedka Magacaabista uu ahaa in xal lo helo xiriirka mugdiga ku jiray ee ka dhaxeeyay Masar & Soomaaliya maadaama la sheego inuu xiriir dhow la leeyahay Masaarida.
Danjire Ilyaas Sheekh Cumar ayaa sanadkii 2019-kii soo noqday Qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jiddah ee dalka Boqortooyada Sucuudi Carabiya, sidoo kale waxaa uu kasoo Shaqeeyay Safaaradda Soomaaliiya ee Qaahira ee dalka Masar.
Arrintan ayaa waxaa ay sidoo kale kusoo aadeeysaa xilli 3-dii Bishaan dowladda Masar ay markale dib u bilaawday inay Maamulka Gobolka Banaadir ka caawiso dib u furitaanka School-ka 15 MAY oo muddo Sannad ah ay hakad gashay waxbarashii Ardayda arrimo ku saabsanaa xiriirka labada dowladood.
Previous articleCiidamo la wareegay guud ahaan degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo u hambalyeeyay Guddoomiyaha Midowga Afrika & kuxigeenkiisa